Baarlamaanka Puntland oo taageeray Dastuurka cusub ee Jubbaland.(Dhegayso) – Radio Daljir
Baarlamaanka Puntland oo taageeray Dastuurka cusub ee Jubbaland.(Dhegayso)
Abriil 3, 2013 8:27 b 0
Garoowe, April 3, Xildhibaanada Barlamaanka Dawlada Puntland ee Soomaaliyeed ayaa maanta si weyn usoo dhaweeyay anixinta Dastuurka lagu dhaqayo maamulka Jubbaland ee maalintii shalay lagu ?meel mariyay shirka ka socda magaalada Kismaayo.
Shir jiraai’d oo ay Xildhibaanada ku qabteen xarunta barlamaanka Puntland ee Garowe ayaa waxay sheegeen in barlamaanka Puntland uu kufaraxsanyihiin nidaamka uu ku socdo shirka maamulka loogu sameynayo gobolada Jubooyinka iyo Gedo Jubbaland State of Soomaaliya.
Waxay baaq udireen Dawlada Federalka ah ee Soomaaliya oo ay ku booriyeen inay taageeraan rabitaanka shacabka Jubbooyinka iyo Geddo.
Halkan ka dhegayso hadalka Xildhibaanada?
Sidoo kale Xildhibaanada ka tirsan Baarlamaanka Puntland ee shirsaxaafadeedka qabtay ayaa sheegay inay ka qayb gelayaan xaflada loo qabanayo soo dhoweynta Ansixinta Dastuurka Jubbaland.
Hadalka ay jeediyeen mudanayaashan ka tirsan Baarlamaanka Puntland ayaa kusoo beegmay xili maalintii shalay ay Ergooyinka kusugan shirka Kismaayo ansixiyeen Dastuurka Dawlad goboleedka Jubbaland.